उच्च सम्मान ! तीन महिनादेखि आफ्नै खर्चबाट आइसोलेसनमा खाना खुवाउँदै ।
चितवन : रामपुर युवा क्लब र होराइजन डेण्टलको समन्वयमा युवाहरुले बिगत ३ महिनादेखि रामपुर अस्पतालमा रहेको को-भि’ड आइसोलेसनमा दैनिक खाना खुवाउदै आएका छन् ।
अस्पतालमा को-भि’ड बि’रामी उपचारको लागि आउदा छिमेकका पसल होटेलले खाना खाजा खुवाउन नमानेपछि युवाहरुले जति सकिन्छ त्यही दिन खाना खुवाउने भनेर आफ्नै खर्चबाट शुरु गरेका थिए ।
अस्पतालका बि’रामी, बिरामीका हेरालु तथा आइसो’लेसनका स्वास्थ्यकर्मीलाई नियमित ३ महिनायता दैनिक साझ- बिहान खाना खुवाएका छन् । रामपुर अस्प’तालमा रहेको आइसो’लेसनका लागी बेझाडमा रहेको होराइजन डेण्टल
क्लिनिक भएको घरमा डेण्टल क्लिनिक र क्लबको समन्वयमा खाना बनाएर युवाहरुले लाने गर्दछ्न्। शुरुमा को’रोनाको संक्र’मण दर ह्वात्तै बढ्दै जादा खाना खान नपाउने अबस्था
आफ्नो आखै अगाडी देखेपछि जे परेपनि सक्दासम्म व्यक्तिगत खाना खुवाउछौ भनेर शुरु गर्यौ रामपुर युवा क्लबका सचिव सुन्दर कडेलले भन्नुभयो- सबैबाट आएको हौसला र सहयोगले ९० दिन सम्म खाना खुवाउन सफल भएका छौ ।डेण्टलका केही कर्मचारीले दैनिक साझ-बिहान खाना बनाउछ्न् ।
यसमा डेण्टलका संचालक डा. शंकर श्रेष्ठ र क्लबका अध्यक्ष छ्म बहादुर दरै, सचिव सुन्दर कडेल, युवाहरु सन्जिप गौतम लगायतका आधादर्जन युवाहरुले नियमित दैनिक बजारबाट सामान ल्याउने, बनाउने र पु¥र्याउन जाने गर्दछ्न् । बिहान ७ देखि पकाउन शुरु गर्नुपर्छ १०-११ बजेको समयमा र साझ ४ बजेदेखि तरकारी बनाउनुपर्छ ६-७ बजेको समयमा खाना पु¥र्याउछौ डेण्टलका संचालक शंकर श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
झोलिलो, पोषिलो तथा मासुको व्यबस्था मिलाएर खाना तयार गर्ने गर्दछ्न् । ९ जनाबाट थालेको खाना खुवाउने अभियान अहिले बि’रामी जति भएपनि खुवाउदै आएका छन् । अहिले सम्म छाकमा सबैभन्दा बढी ३० जनालाई खाना खुवाएको रेकर्ड उनीहरु संग छ ।
बि’रामी हुँदा सम्म निशुल्क खाना खुवाउने युवाको सोच छ । घरबाट आउन जान आफन्ती नहुने र संक्र’मितको आशन्का लागेकाको परिवारका आफन्ती नभएको अबस्थामा निकै सहज भएको उनीहरुको भनाई छ ।अहिलेसम्म ३ हजार भन्दा बढी पिलेट खाना युवाहरुले खुवाएका छन् ।
दैनिक खाना खुवाउनेहरु को’भिड बढे संगै बढेका छन् । अहिलेपनि आइसो’लेसनमा १३ जना बिरामी रहेको रामपुर अस्पतालका डा.बासुदेव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।युवाहरुको यो उत्साह र सहकार्यमा धेरैले साथ दिएका छन् ।
हाल विभिन्न संघ सस्था र बिदेशमा हुने नेपालीले युवाहरुको असल कार्यमा समर्थन जनाउदै रकम सहयोग गरेका छन् ।
यसैविच रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापाले ३ महिना पुगेको समयमा आफुले पाउने तलब बापतको सहयोग गर्नुभएको क्लबका अध्यक्ष छम बहादुर दरैले जानकारी दिनुभयो । उहाँले नगद १ लाख सहयोग गर्नुभएको छ दरैले भन्नुभयो ।
२०७८ श्रावण २८, बिहीबार २३:५२ गते 1 Minute 456 Views